के नेपालमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण तेश्रो चरणमा पुगेको हो ? « Mechipost.com
के नेपालमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण तेश्रो चरणमा पुगेको हो ?
प्रकाशित मिति: १० बैशाख २०७७, बुधबार २१:१९
उदयपुर जिल्लाको भुल्केमा सबैभन्दा बढी २७ जना कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितहरू पाइएका छन् । एकै स्थानमा धेरै सङ्क्रमित पाइएपछि के नेपालमा भाइरस सङ्क्रमणको तेस्रो चरणमा पुगेको हो भन्ने प्रश्न उठेका छन् ।
तर सङ्क्रमितहरूको विस्तृत जानकारी प्राप्त नहुँदै तेस्रो चरण अर्थात् समुदायस्तरमा रोग फैलिने चरणमा प्रवेश गरेको भन्न नसकिने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले बताएका छन् ।
उक्त जिल्लाको त्रियुगा नगरपालिका–३ बाट सङ्कलन गरिएका नमुनामा अहिलेसम्म २७ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । प्रवक्ता डा देवकोटा भन्छन् “सङ्क्रमितहरू स्थानीय बासिन्दा भएपनि उनीहरू कहाँबाट आए, को–कसलाई भेटे, कहिलेबाट सङ्क्रमित भए भन्ने कुरा थाहा नपाइकन तेस्रो चरणमा पुगिसकेको भन्न सकिने अवस्था छैन ।”
अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसको पहिचान र विश्लेषणको काम गरिरहेको बताइएको छ । प्रवक्ता देवकोटा थप्छन् “यदि तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेको भन्ने निक्यौल भएमा रणनीतिहरूमा केही परिवर्तन गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।”
सामान्यतस् विदेशबाट आएका व्यक्तिमा मात्र देखिने चरणलाई पहिलो, तिनले आफन्त वा छरछिमेकमा सार्नेलाई दोस्रो र समुदायमा फैलिनेलाई तेस्रो चरण भन्ने गरिन्छ ।
उदयपुर किन केन्द्रमा ?
नेपालमा अहिलेसम्म ९ हजारभन्दा धेरैमा पीसिआर विधिबाट परीक्षण गर्दा ४५ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएकोमा एकैठाउँमा सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित पाइएको उदयपुरको भुल्के क्षेत्र हो । उदयपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमप्रसाद भट्टराईका अनुसार त्यहाँबाट अहिलेसम्म ३२० जनाको नमुना सङ्कलन गरिएकोमा कतिपयको नतिजा अझै आउन बाँकी छ ।
उनले भने “यसअघि नै लकडाउन जारी रहेपनि प्रदेश सरकारले जिल्ला सील गर्ने निर्णय गरेपछि अत्यावश्यक कामका लागि बाहेक भुल्के क्षेत्रमा आउजाउ ठप्प पारेका छौँ । पीसिआरबाट सङ्क्रमण पुष्टि भएका ठाउँमा फराकिला घेराहरू कायम राखेर नमुना सङ्कलन र कडाइ गरिएको हो ।”
मङ्गलवार पुष्टि भएका सङ्क्रमितहरू सोही ठाउँमा यसअघि भेटिएका मानिसहरूबाट सारेको होरहोइन भन्ने विषयलाई अहिले अध्ययनको आधार बनाइएको बताइएको छ । त्यो स्पष्ट भइनसकेको अवस्थामा त्यहीँ समेत विभिन्न चरणमा तर आपसमा सम्बन्ध नभएका सङ्क्रमण फैलिएको छ कि भनेर शङ्का गर्ने ठाउँ समेत भएको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
वैशाख ५ गते पुष्टि भएका सङ्क्रमितमा समेत भाइरस कहाँबाट सर्यो र तीमध्ये कसले कसलाई सारेका हुन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । उदयपुरमा सुरुमा त्यहाँको एक मस्जिदमा सङ्क्रमित भएका पुष्टि भएकाहरू चार महिनादेखि नेपालमा रहेको भन्ने विवरण समेत आएका छन् ।
यसबीचमा उनीहरू नेपालमा थुप्रै ठाउँमा बसेका हुनाले त्यस अवधिमा भेटेका मानिसहरूको विस्तृत पहिचान गरेर अन्यत्र कतै स्थानीय प्रकोपहरू भएका हुनसक्नेबारे खोज्न आवश्यक रहेको बताइन्छ ।
सङ्क्रमणरोग विशेषज्ञ डा अनुप सुवेदी भन्छन् “तर प्रारम्भिक रूपमा हेर्दा यो तेस्रो चरणमा पुगेको भन्ने सङ्केतहरू पाइन्छ ।” अझै कतिपय पीसिआरको रिपोर्ट आउँदा त्यसमा समेत सङ्क्रमणहरू देखिएमा त्यसले अझ बढी आधार दिनसक्छ ।
यसलाई देशका अन्य ठाउँमा समेत यसरी भित्रभित्रै सङ्क्रमण फैलिएका जोखिमयुक्त पकेट क्षेत्रहरू हुनसक्ने सङ्केतका रूपमा विज्ञहरूले हेरेका छन् । कतिपय ठाउँमा द्रुत परीक्षणमा सङ्क्रमण पाइए पनि पीसिआर भनिने प्रयोगशालामा गरिने जाँचमा त्यसको पुष्टि हुन सकेको छैन ।
त्यसको अर्थ कतिपय मानिसहरूलाई सुरुमा सङ्क्रमण देखिए पनि पछि निको भएको हुनसक्ने डा सुवेदीजस्ता विज्ञहरूको भनाइ पाइन्छ । जसले गर्दा त्यसबीचमा उनीहरूबाट अरूलाई सरेको हुनसक्ने सम्भावनालाई बेवास्ता गरिएको हुनसक्ने एकथरी विज्ञहरू ठान्छन् ।
डा सुवेदी भन्छन् “अहिलेसम्म हामीले पीसिआरबाट सङ्क्रमण देखिएकाको मात्रै सम्पर्क व्यक्तिहरू पहिचानको काम गरेका छौँ । तर अब त्यो द्रुत परीक्षण किटबाट पोजेटिभ देखिएको अवस्थामा समेत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।”
नेपालमा महामारीविज्ञहरू सहितको जनशक्ति अभावले गर्दा सम्पर्कको पहिचानका लागि स्थानीय सरकारको संयन्त्र र महिला स्वयंसेविकाहरूको भूमिका निकै महत्वपूर्ण रहेको बताइने गरेको छ।
युवा सङ्क्रमित हुनुको ‘जोखिम’
नेपालमा अहिले भेटिएका सङ्क्रमितहरू धेरैजसो युवा अवस्थाका पाइएका छन् र उनीहरूमा मध्यमखाले लक्षणहरू मात्र देखिएका विवरणहरू आएका छन् । अहिले उपचाररत सबै सङ्क्रमितहरूको स्वास्थ्य अवस्था समेत सामान्य रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । महामारीको ठूलो मार खेपेका देशको तुलनामा त्यसले गर्दा नेपालमा सङ्क्रमितको पहिचान सहज नभएको बताइएको छ ।
डा सुवेदी भन्छन् “युवाहरूमा रोगका गम्भीर किसिमका लक्षण निकै कम पाइने र तिनले युवाहरूमै सङ्क्रमण फैलाउँदा त्यसले प्रकोपको झल्को नदिनसक्ने जोखिम भएकाले सम्पर्क भएका व्यक्तिको पहिचानको काम र उनीहरूको परीक्षण एवं एक्ल्याएर गर्ने काम निकै सुक्ष्म ढंगले गर्न आवश्यक छ ।”
तर अधिकारीहरूले भने थुप्रै देशमा सङ्क्रमितको संसर्गमा आएकाहरूलाई एक्ल्याएर मात्र राख्ने गरिएकोमा नेपालमा भने अहिलेसम्म तिनको समेत जाँच गर्ने गरिएको बताउँछन् । (बीबीसी नेपालीबाट)